Umthandazo wokuba i-ex yam ibuye. ? Buya nam kwaye ubuyisele iqabane
Thandazela ukuba i-ex yam ibuye Isenokuba lusindiso lwethu kuphela kuloo maxesha apho ulwalamano lothando.
Singamenza lo mntu ukuba abuyele kuthi ngexesha elincinci kunokuba kulindelwe kwaye sonke ngokuthetha nje umthandazo wokuba uninzi lubonakale lilula kodwa lunamandla amakhulu.
Ngalo mthandazo singacela ukuba iqabane lethu elingumlingane wethu liqonde iimpazamo azenzileyo kwaye sibuyele ngokuzisola ngentliziyo beswele inkampani yethu kwaye kulapho sizokubona amandla kunye nokusebenza kakuhle yemithandazo yenziwe kwimfuno yomphefumlo.
1 Thandazela ukuba i-ex yam ibuye
2 Thandazela ukuba i-ex yam ibuye kunye nam
3 Umthandazo onamandla wokubuyisela iqabane lakho
4 Umthandazo wokubuyisa umyeni wam
5 Ndingaqala nini ukuthandazela umamam ukuba abuye?
Lo ngomnye wemibuzo ebuzwa ngabafundi bethu.
Unokuqiniseka ukuba umthandazo unamandla.
Siza kukubonisa ubuncinci i-3 ngeenjongo ezahlukeneyo. Zonke zavavanywa ngamakhulu abantu.
Basebenza ngendlela elula, ekhawulezayo nesebenzayo kakhulu. Thandaza nje ngokholo kwaye ukholelwe ukuba uza kuqhuba kakuhle.
Thandazela ukuba i-ex yam ibuye kunye nam
Ukuba ubuya Ngamandla e-SAN CIPRIANO kunye nee-SOULS ezintathu ezibukele kwiSAN CIPRIANO, i-CJCG ngoku iza emva kwam.
I-MVBO Uya kuza enxanelwe Kwaye, eluthandweni, luzele luthando, umnqweno wokubuya kwaye ndicela uxolo ngokuxoka kwaye ubuze kum ukuba nithandane kwaye kamva emtshatweni ngokukhawuleza.
I-SAN CIPRIANO, ndiza kuba naloo mandla ayilibalayo kwaye sele eshiye naliphi na ibhinqa elisenokuthi lisentloko kwaye ibuyele kundithatha ndiyokuzazisa ngayo yonke into ukuze ibone.
I-SAN CIPRIANO kude ne-CJCG naliphi na ibhinqa, ukuba indijonge ngamaxesha onke, NAMHLANJE NAMHLANJE, ndinqwenela ukuba ecaleni kwam, kukuba inoKUGQIBELA NDINGUMFAZI OWENZELAYO, Yiba nomfanekiso wam ekucingeni kwakho ngamaxesha onke.
NGOKU, UKUBA YINTONI, KUPHI NA, XA IYA KUFUNA mna XA KUKHO IXABISO LAKHE LAM.
Nasebhedini uyaphupha ngam kwaye xa uvuka ucinga ngam kwaye ufuna mna, xa usitya, cinga ngam, xa unyathela kum, cinga ngam, KUZO ZONKE IZITOLO ZOBOMI BAKHO UCINGA NGAM.
Oko kufuna ukundibona, ukuva ivumba lam, kundibambe ngoTHANDO, ukuba i-CJCG ifuna ukundanga, indincamise, indikhathalele, indikhusele, indithande iiyure ezingama-24 ngosuku, isenza loo nto, ukuba indithanda ngakumbi yonke imihla kwaye ivakalelwa nje kukuva nje Ilizwi lam
I-SAN CIPRIANO yenza ukuba i-CJCG indive kum njengomnqweno ongaqhelekanga, njengoko engazange azive esenza enye kwaye akangekhe azive
Ukuze ndonwabe ndim kuphela, kukuba ndinomnqweno kuphela kum nokuba umzimba wakhe ungowam kuphela, ukuba abe noxolo kuphela ukuba uphilile.
Ndiyabulela kuwe uSAN CIPRIANO ngokusebenza kum kwaye ndiza kudlulisela igama lakho ekuhlawuleni i-CJCG kwaye ndiyizise ngothando, uthando, ngokuzinikela, ngokuzinikela, ngokuthembekileyo, nangokuzithemba kwimikhono yam.
Ukubuyisa uthando lwethu, uthando lwethu kunye nokutshata kwam ngokufutshane njengoko kunokwenzeka.
Ndicela ukuba kumandla ezi URL ezintathu ezimnyama abukele ii-CIPRIANO. Amen
Lo mthandazo wokuba i-ex yam ibuye kunye nam inamandla amakhulu.
Ngamaxesha okuba nengxaki neqabane lethu asikhe sicinge ukuba le iya kuba ngumlo wokugqibela, ukuba emva kwalo mzuzu ubomi bethu buzakutshintsha ngoba omnye umntu uthatha isigqibo sokusishiya ngokungathi akukho nto.
Into yile yokuba kula maxesha okucaphukisa kakhulu sihlala singacingi ukuba sithini kwaye sizifumanisa senze iimpazamo ezininzi, ezo zinokubangela ukuba ubudlelwane buqhawuke.
Nangona kunjalo, le nkqubo inokusinceda siqonde ukuba senze ntoni ngokungalunganga kwaye njengoko sicela ukuba iqabane lakho langaphambili libuyele kubudlelwaneInto ebalulekileyo kukukwenza ngokucacisa yonke into kwaye ukuba nawo lo mthandazo unokusinceda.
Umthandazo onamandla wokubuyisela iqabane lakho
“Santa Helena, kumkanikazi wam othandekayo, ove ubunzima obusezintlungwini ezintathu, weza nezipikili ezintathu, enye ngonyana wakho uConstantine, omnye wamzisa emanzini olwandle, ukuba ubanike impilo kunye nokukhuseleka kwabahambi ngeenqanawa, ngoku Ndicela ukuba lo mntu wesithathu andinike, ndiwubethe entliziyweni nasengqondweni (yomntu omfunayo), ukuze angabi nalo uxolo entliziyweni yakhe.
Ndikunika umzimba wam kunye nomphefumlo wam, (igama lomntu) Yiza kum ngaphandle kwento ezahlulahlula kuthi, ngaphandle kwezithintelo, ukuba undifuna emzimbeni, emphefumlweni, ukuba ndizobuya ndithotyiwe, ukuba ndiza kuwa ezinyaweni zam, ukuba ndizokucela ithuba lokuba nam, Saint Elena undincede.
Saint Elena, ngamana ukukhanya kwakho kungangokundikhokelela kobu bumnyama boyikekayo ndibuvayo, ukuze yonke imihla ube nguwe ohamba nam, oza nothando njengokokuqala ukumbona kwam, ndiyavuma kuwe Saint Elena Olu thando, njengenja.
Ngalo mthandazo unamandla ndifuna ukufumana uthando lwalo mntu, ondithandayo, ukuba abuyele kum, sint onamandla, ndicela usibone umfanekiso wothando lwakho, beka olu thando phambi kwam kwindlela yethu kwakhona.
Ngoku Santa sithandwa ndiyakuthembisa ukuba ukuba uza nayo ecaleni kwam, ndiyeke (Into oyithandayo kakhulu) kangange veki, ukuze ubone ukuba uthando ndiziva ndilomelele, ukuba, vice, bendikuthembile othandekayo uSanta Elena, bendikuthembile nyani kwaye ngentliziyo yam, bendikuthembile wena ukumkanikazi wothando, bendikuthembile, eluthandweni lwethu. ”
Thandaza umthandazo ukuba uphinde umlingane wakho ube nokholo oluninzi.
Ukubuyisela kwakhona iqabane lakho elingaphezulu koko kunokukucela ukuba ubuye ekhaya, kungokubuyela kwimeko nganye yelizwi. Ngamana uthando oluswelekileyo lusenokuphinda luzalwe ngokutsha nangakumbi kunangaphambili.
Asinakuwenza lo mthandazo ngenxa yokuzingca, kwiminqweno yethu yokuzibophelela komnye umntu ukuba enze le nto siyifunayo ngayo nayiphi na into.
Le yile umthandazo ekufuneka wenziwe ngentliziyo ngesandla, kuqala ukuqaphela into esiyenze ngokungalunganga kunye nokuzimisela ngokuzeleyo kokuxolisa kunye nokwakha kwakhona ubudlelwane obuqinisekileyo bokuba omnye umntu uziva okanye uzimisele ukwenza okufanayo.
Umthandazo wokubuyisa umyeni wam
Ooh Elena lomnqamlezo, ungandilibali, wena Woyera wam, unothando olunamandla, ndiza kuwe ukukuxelela, ukukubuza nokukucenga, kuba kufanele wazi ukuba (igama lomntu) uphume endlini ngenxa Omnye umfazi, yizani kum kwakhona.
Saint Elena, ndenze ukuba ndicinge ngomonakalo oye wandenza ukuba ndihambe nomnye umntu obhinqileyo, ndicinga ukuba yinto entle, ngubani na onomnqweno, ndiyamthanda ngokusuka entliziyweni, makenze ukuba abuye kungekudala, amsondeze kum, Ndilibale, nantoni na endiyenzayo, ungaze uyeke ukucinga ngam.
U-Elena oNgcwele womnqamlezo, uthando endiluvayo ngenxa yale ndoda lukhulu kakhulu, ndamnika ubutsha bam, eyona minyaka ibalaseleyo ebomini bam, ndingumama wabantwana bakhe, iintlungu nosizi endinalo lukhulu kakhulu, uyahamba nje ukuzonwabisa xa ndifika njengemvana ethambileyo kwaye ndicela uthando lwam.
Ndiyathemba ukuthandazelwa ngumama wam kunye nomyeni wam ukuba babuye emsebenzini.
Umtshato kukuzibophelela okucingelwa phakathi kwabantu ababini kude ukufa Yahlule, kodwa eyokugqibela ayisoloko izalisekiswa kuba nangaliphi na ixesha ubudlelwane bunokuwohloka bubangele ukuqhekeka kobudlelwane kunye noqhawulo mtshato kamva.
Le yingxaki esele ikhula eluntwini kwanakumaqabane amakholwa.
Kwezi meko lo mthandazo unokuba luncedo kakhulu kuba usivumela ukuba siphinde sihlangane nalo mfaziokanye ukuba awufuni ukuqhubeka nobudlelwane.
Kuluntu olufundisa ukuba into engeloncedo ilahlwe kude, kunamandla ukuba nesixhobo ukuze sikwazi ukugcina umtshato usempilweni nasempilweni ngokwasemzimbeni nangokomoya kwaphela.
Ndingaqala nini ukuthandazela umamam ukuba abuye?
Lo mthandazo unokuthandazwa naphi na xa ufuna.
Ayinaxesha lemini okanye ixesha leveki.
Into ebalulekileyo kukuba uthandaze umthandazo ukuze u-ex wam abuye kunye nokholo oluninzi kwaye ukholelwe ukuba yonke into ihamba kakuhle.
Umthandazo onamandla kuSanta Muerte ukuze othandekayo abuyele
Umthandazo onamandla wokususa iliso elingendawo
Umthandazo wokundibiza namhlanje